Iqhubekile Inkundla Yabantu ngebhuku likaMadondo - Bayede News
Inkundla Yabantu, okuwuhlelo oluqhutshwa yi-Igunundu Press ibambisene nePlayhouse ibamba isithangami ngezikhathi ezahlukene kukhulunywa ngezinto ezithinta imiphakathi ehlukahlukene nomake izwe lonke laseNingizimu Afrika, noma izwekazi lase-Afrika. Izinkulumo ezingaphansi kwe-Inkundla Yabantu, zigxile kakhulu ezintweni ezithinta aboHlanga, kakhulu ezingempilo yabo.
Mhla zingama-20 kuLwezi wezi- 2019, Inkundla Yabantu yaba nohlelo lapho kwakubungazwa incwadi ebhalwe nguMehluleli uMadondo lapho ekhuluma khona ngokusebenza kwezinkantolo zomdabu ngaphansi koMthethosisekelo weNingizimu ekhululekile. Le ngxoxo ngale ncwadi ibifaka phakathi abameli beTheku, nabanye osaziwayo kwezomthetho. Isasasa ngale ncwadi kwakuwukuthi ikhuluma ngokuthi impilo yaboHlanga ithinteka kanjani kwezomthetho uma kusetshenziswa izinkantolo zabomdabu.
Okwavela ku-Inkundla Yabantu, kwaba ukuthi izinkantolo zomdabu zisebenzisa imithetho egxile emlandweni nasezindleleni zokuphila kwabantu boHlanga kusukela mandulo. Lokhu kusho ukuthi lena yimithetho aboHlanga abangayitholanga ekufikeni kwamaBhunu noma kwamaNgisi. Izinkantolo zomdabu zazisebenza kubantu ukuze kube nokuthula nokuzwana, hhayi ukuzwisa abanye ubuhlungu. Kwabe kuyizinkantolo zokubumba ubunye kubantu nasezweni lonke.
UMehluleli uMadondo wakuveza ukuthi ngokuhamba kwesikhathi kube nezinguquko emthethweni nasezinkantolo zomdabu. Olunye lwezinguquko lwenzeka ngokufika kwabelungu becindezela aboHlanga ngokusebenzisa umthetho abawejwayele obizwa ngokuthi yiCommon Law noma-ke iCivil Law. Basebenzisa impoqo yokuthi izinkantolo zomdabu zibe namandla angaphansi kwalawo ezinkantolo zabelungu. Okunye okwenzeka ukuthi ingcindezi yobukoloni inike abelungu amandla okusho ukuthi yini ezosebenza naleyo engezokusebenza ezinkantolo zomdabu.
Isibonelo salokhu okungenhla wukuthi nje abaholi bomdabu babe namandla aphansi ekusebenzeni ezinkantolo zomdabu. Konke lokhu, kwasho ukuthi izinkolo zomdabu nomthetho ezabe zakhelwe phezu kwawo, kwase kuguquke kakhulu kulokhu okwakuyikho bengakafiki abelungu. Lezi zinguquko zaba namandla ngoba kunanamhla nje, lokhu okubizwa ngezinkantolo zomdabu kuyilokhu okwashicilelwa abelungu ababecindezela ngakho aboHlanga.
Encwadini yakhe uMehluleli uMadondo waphinde wakhombisa ukuthi ukutholakala kwenkululeko ngowe-1994, kwaba nomthelela omkhulu ekusebenzeni kwezinkantolo zomdabu. Ngokusho kukaMadondo, izinkantolo zomdabu zashicilelwa kuMthethosisekelo. Lokhu kusho ukuthi izinkantolo zomdabu ziyingxenye yohlelo lwezobulungiswa eNingizimu Afrika. Lokhu kuyahambisana nezinqinamba zombuso wedemokhrasi.
Akungatshazwa ukuthi lena yinto eyamukelekayo futhi ejatshulelwayo, kodwa kukhona okulokhu kusina kusijeqeza. Njengokuthi nje, ngempela kuyini lokho okushicilelwe kuMthethosisekelo? Kunengozi yokuthi sishicilele inqubo yengcidezelo eyayikhandelwe ukucindezela aboHlanga. Abasihambela phambili kanye nongoti bomlando bayasho ukuthi umlando uyaziphinda. Kungabe yilokho okwenzeka kithina manje ngokusebenza kwezinkantolo zomdabu?
Kule-Inkundla Yabantu, ababekhona baba nemibuzo eminingi, okwakhombisa ukuthi izinkulumo zamukeleka ngesasasa. Ngaphezu kwemibuzo abanye baphawula ngabakubonile ekusebenzeni ezinkantolo zomdabu. Baphawula ukuthi, yize izinkantolo zomdabu zikuMthethosisekelo, kuyaqhubeka ukuzibukela nokuzithathela phansi. Okwesabisayo wukuthi noHulumeni imbala akazithatheli phezulu izinkantolo zomdabu. Okwavezwa abanye kwaba ukuthi labo ababizwa ngongoti emthethweni nasezinkantolo zomdabu, bangabelungu. Lokhu kuyimpicabadala ngoba ongoti laba abayiphili impilo yendabuko, kanti nokhokho babo abazange bayiphile. Kungenzeka ukuthi aboHlanga abakalitholi ithuba lokufunda ngokusebenza kwezinkantolo zomdabu. Uma kunjalo, sisenenselelo enkulu okumele ukuthi noHulumeni asebenze ngokuzikhandla ukuze kuguquke lesi simo
Ekugcineni kwalesi sithangami se-Inkundla Yabantu, ababekhona babonga kakhulu uMehluleli uMadondo ngomsebenzi omuhle awenzile ngokubhala leli bhuku. Injabulo yabo bayikhombisa ngokulithenga ibhuku. UMehluleli uMadondo wethembisa ukuthi kukhona ezinye izinto azozifaka ukuze leli bhuku libe likhulu kunalokhu eliyikho. Waphinda wethembisa ukuthi akhona amanye amabhuku awabhalayo, nawo okuyoxoxwa ngawo kuyo Inkundla Yabantu.
Bese kungokwesithathu kuba khona Inkundla Yabantu njengoba ngenyanga eyedlule kube khona ebesibuka ipolitiki yomnotho nebihanjelwe ngabantu abangama-500 abebevela kuzo zonke izifundazwe. NgoMfumfu Inkundla Yabantu ihlanganise amaholi bamaqembu epolitiki ngaphansi kwesihloko esibheka ukuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane. Phakathi kwabaholi ababekhona kwakuyiSekela Somlomo uMhlonishwa uMluleki Ndobe, umholi we-Inkatha Freedom Party (IFP) uMhlonishwa uVelenkosini Hlabisa. Wayekhona nomholi weDemocratic Alliance (DA) KwaZulu-Natal, uMhlonishwa uZwakele Mncwango. Uhlelo olulandelayo lungoMasingana ngowezi-2020 noluzobe lubuka umlando waboHlanga.